Bit By Bit - အပြေးစမ်းသပ်ချက် - 4.4 ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ချက် ကျော်လွန်. Moving
ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ချက်ကျော်လွန်ရွှေ့ကြစို့။ သုံးသဘောတရားကြွယ်ဝသောစမ်းသပ်ချက်များအတွက်အသုံးဝင်သောနေသောခေါင်းစဉ်: တရားဝင်မှု, ကုသမှုသက်ရောက်မှုများပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနှင့်ယန္တရားများ။
စမ်းသပ်ချက်အသစ်နေသောသုတေသီများမကြာခဏဟာအလွန်တိကျတဲ့, ကျဉ်းမြောင်းသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုအာရုံစိုက်: ဤကုသမှုကို "အလုပ်" ကိုပါသလား ဥပမာအားဖြင့်, စေတနာ့ဝန်ထမ်းကနေဖုန်းခေါ်မဲပေးတစ်စုံတစ်ဦးကအားပေးပါသလဲ? အစိမ်းရောင်အတိုးဖို့ကလစ်-မှတဆင့်နှုန်းမှာအပြာကနေ website တစ်ခုခလုတ်ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ပါသလား? ကံမကောင်းစွာပဲ, အဘယ်သို့သောအကြောင်းမြည်းကြိုးကိုဖြည်ထားသောစာပိုဒ်တိုများကျဉ်းမြောင်းစွာအာရုံစိုက်စမ်းသပ်ချက်ကယ့်ကုသမှုအထွေထွေသဘောမျိုးထဲမှာ "အလုပ်လုပ်တယ်" ရှိမရှိသင်ပြောပြကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုမိုက်စေသော "အလုပ်လုပ်တယ်" ။ ဤအချိန်တွင်သင်တန်းသားများ၏ဤလူဦးရေအဘို့ဤတိကျတဲ့အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့်အတူဤတိကျတဲ့ကုသမှု၏ပျှမ်းမျှအကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ: အစား, ကျဉ်းမြောင်းစွာအာရုံစိုက်စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုပိုပြီးတိကျတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေ? ငါသည်ဤကျဉ်းမြောင်းသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ချက်အာရုံစိုက်ကြောင်းစမ်းသပ်ချက်ကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ချက်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်ပေးနိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ထိုကဲ့သို့သောကုသမှုပိုကြီးတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ဘယ်သူကိုတချို့လူတွေရှိပါတယ်ရှိမရှိအဖြစ်အရေးကြီးသောနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြောင်းမေးခှနျးမြားစှာ, ဖြေကြားရန်ပျက်ကွက်; ပိုပြီးထိရောက်လိမ့်မယ်လို့အခြားကုသမှုလည်းမရှိရှိမရှိ; နှင့်ရှိမရှိကဒီစမ်းသပ်မှုကျယ်ပြန့်လူမှုသီအိုရီမှပြောပြတယ်။
ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ချက်ကျော်လွန်ရွေ့လျား၏တန်ဖိုးကိုပြသနိုင်ဖို့အတွက်မယ့်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ် P. ယ်စလီ Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကတစ်ဦး Analog စလယ်ပြင်စမ်းသပ်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကုန်အံ့ (Schultz et al. 2007) ။ Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များက San မားကို့စ, California မှာ 300 အိမ်ထောင်စုအပေါ် doorhangers ချိတ်ဆွဲ, ဤ doorhangers စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးအားပေးဖို့ဒီဇိုင်းကွဲပြားခြားနားသောမက်ဆေ့ခ်ျကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ ထို့နောက် Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်နှင့်သုံးပတ်အကြာတွင်နှစ်ဦးစလုံး, လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲမှုပေါ်ဤအကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုင်းတာ; စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းကိုတစ်ဦးပိုမိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအတွက် 4.3 တွက်ဆကြည့်ပါ။
ပုံ 4.3: ကနေစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းသိထား Schultz et al. (2007) ။ လယ်ပြင်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုရှစ်ပတ်ကြာကာလအတွင်းစန်းမားကို့စ, California မှာငါးကြိမ် 300 ခန့်အိမ်ထောင်စုသွားရောက်လည်ပတ်ပါဝင်ပတ်သက်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအလည်အပတ်တွင်သုတေသီများကိုယ်တိုင်အိမ်တော်ကိုရဲ့ပါဝါမီတာကနေစာဖတ်ခြင်းကိုယူ။ လာရောက်နှစ်ခုတွင်, သူတို့ကအိမ်ထောင်စုရဲ့စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုပေးချင်းစီအမျိုးအပေါ်သို့ doorhangers တင်လိုက်တယ်။ အဆိုပါသုတေသနမေးခွန်းတစ်ခုကိုထိုအမက်ဆေ့ခ်ျများ၏ content စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို impact မယ်လို့မည်သို့မည်ပုံဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုအခြေအနေနှစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး၌, အိမ်ထောင်စုသူတို့ရဲ့ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက် (ပရိတ်သတ်တွေအစားလေအေးပေးစက်ကိုသုံးဥပမာ) ယေဘုယျစွမ်းအင်ချွေတာအကြံပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Schultz နှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ပုံမှန်အပြုအမူ (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးဖော်ပြရန်စံ) အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ကြောင့်ဖော်ပြရန်စံတန်ဖိုးခွအေနအေဒီဟုခေါ်တွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ။ Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကဤအုပ်စုတွင်ရလဒ်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုမှာကြည့်ရှုသောအခါ, ကုသမှုဖြစ်စေရေတိုသို့မဟုတ်ရေရှည်မှာမရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပေါ်လာသည်ကား, တစ်နည်းအတွက်ကုသမှု (ပုံ 4.4) "အလုပ်မဖြစ်" ကိုမထင်ခဲ့ပေ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကဒီရိုးရှင်းတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့အနည်ထိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုစတင်ခင်မှာ, သူတို့ကလျှပ်စစ်မီး-လူများမိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများယုတ်-စေခြင်းငှါ, သူတို့ရဲ့စားသုံးမှုကိုလျှော့ချနှင့်လျှပ်စစ်မီး-လူမျိုး၏အလင်းအသုံးပြုသူများကိုအောက်တွင်ယုတ်-စေခြင်းငှါ, တကယ်ကသူတို့ရဲ့စားသုံးမှုတိုးမြှင့်ကြောင်းအထက်ပါနှီးနှောလေ၏။ သူတို့က data တွေကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါ, သောသူတို့သည် (ပုံ 4.4) ကိုတွေ့အတိအကျယျ။ ထို့ကြောင့်အဘယ်အရာကိုမျှမသက်ရောက်ရှိခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ကုသမှုတူအမှန်တကယ်နှစ်ခု offsetting သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ကုသမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အလင်းကိုအသုံးပြုသူများသည်သူတို့တွင်ဤသည် counterproductive တိုးတဲ့ကုသမှုရည်ရွယ်ခဲ့ရာကနေဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ဘယ်မှာထိကပြန်အကျိုးသက်ရောက်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကနေရလာဒ်: 4.4 ပုံ Schultz et al. (2007) ။ Panel ကို (က) ဖော်ပြရန်စံကုသမှုခန့်မှန်းခြေသုညပျမ်းမျှအားကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြသထားတယ်။ သို့သော် panel ကို (ခ) ဤပျမ်းမျှအားကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအမှန်တကယ်နှစ်ခု offsetting သက်ရောက်မှုများရေးစပ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများအတွက်, ကုသမှုအသုံးပြုမှုလျော့ကျပေမယ့်အလင်းအသုံးပြုသူများအတွက်, ကုသမှုအသုံးပြုမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ panel က (ဂ) ဖော်ပြရန်နှင့်တရားရုံးမိန့်စံချိန်စံညွှန်းကိုသုံးရသောဒုတိယကုသမှု, အကြမ်းအားဖြင့်လေးလံသည်အသုံးပြုသူများအပေါ်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကွောငျးဖျောပွဒါပေမယ့်အလင်းသည်အသုံးပြုသူများအပေါ်ထိကပြန်အကျိုးသက်ရောက်လျော့ပါး။ ကနေအဆင်ပြေအောင် Schultz et al. (2007) ။
ပထမဦးဆုံးအခွအေနအေမှတစ်ပြိုင်နက်, Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်လည်းတစ်စက္ကန့်အခွအေနေပွေးလေ၏။ ဒုတိယအခြေအနေအိမ်ထောင်စုသူတို့ရဲ့ရပ်ကွက်အတွင်း-နှင့်တသားတသေးသေးလေးများအပြင်များအတွက်ပျမ်းမျှနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသူတို့အိမ်သူအိမ်သားရဲ့စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အတိအကျတူညီကုသမှု-ယေဘုယျစွမ်းအင်ချွေတာအကြံပေးချက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိ: အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော-ပျမ်းမျှအားစားသုံးမှုနှင့်အတူလူများအတွက်, သုတေသီတစ်ဦးကဆက်ပြောသည်: ) နှင့်သူတို့တစ်တွေ :( ဆက်ပြောသည်။ အဲဒီရုပ်ပြောင်သုတေသီမိန့်စံချိန်စံညွှန်းကိုခေါ်ဘယ်အရာကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ မိန့်စံချိန်စံညွှန်းလေ့အတည်ပြု (နှင့်အတည်ဘာ၏သဘောထားအမြင်ကိုရည်ညွှန်း), ဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်းများသဘောထားအမြင်ကိုရည်ညွှန်းသော်လည်းအထက်-ပျမ်းမျှအားစားသုံးမှုနှင့်အတူလူများအတွက် အများအားဘယ်သို့ပြုနေသည် (Reno, Cialdini, and Kallgren 1993) ။
ဒီတစ်ခုအလွန်သေးငယ်သောအီမိုတီကွန်ပေါင်းထည့်ခြင်းအားဖြင့်, သုတေသီသိသိသာသာထိကပြန်အကျိုးသက်ရောက် (ပုံ 4.4) လျှော့ချ။ ထို့ကြောင့်ဒီတစ်ခုရိုးရှင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှု-တစ်ဦးအနေနဲ့စိတ္တဇလူမှုရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြောင်းလဲမှုအောင်နေဖြင့် (Cialdini, Kallgren, and Reno 1991) ဖွသုတေသီများ, အလုပ်လုပ်ခဲ့တစ်ခုသို့အလုပ်လုပ်ရန်မထင်ခဲ့ဘူးသော program တစ်ခုဖွင့်နိုင်ခဲ့ကြတယ် နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူတို့လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းလူ့အပြုအမူကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံကို၏အထွေထွေနားလည်မှုအထောက်အကူပြုနိုင်ခဲ့ကြတယ်။
ဤအချက်မှာ, သို့သော်, သငျသညျအရာတစ်ခုခုကဒီစမ်းသပ်မှုတွေအကြောင်းနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုသတိထားမိပေလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်, Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏စမ်းသပ်မှုတကယ်လုပ်ပေးထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်ချက် randomized သောတူညီသောလမ်းအတွက်တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုမရှိပါ။ ဒီဒီဇိုင်းနှင့် Restivo ၏နှင့်ဗန်က de Rijt အကြားတစ်ဦးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှစ်ဦးကိုအဓိကစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများကြားရှိကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ၏အဖြစ်အကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများအတွက်တစ်ဦးကိုကုသအုပ်စုတစ်စုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုရှိပါတယ်။ အတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများခုနှစ်, အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်တန်းသားများ၏အပြုအမူကုသမှုမီနှင့်အပြီးနှိုင်းယှဉ်နေပါတယ် (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) ။ တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူသူမ၏ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုအဖြစ်ပြုမူလျှင်အဖြစ်အတွင်း-ဘာသာရပ်စမ်းသပ်မှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်း-ဘာသာရပ်များစမ်းသပ်ချက်၏ခွန်အားခန့်မှန်းချက်များတိုးမြှင့်တိကျနေစဉ်အကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများ၏အစွမ်းသတ္တိကို (ငါအစောပိုင်းကဖော်ပြထားသကဲ့သို့) သူတို့ရှက်ကြောက်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုအကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်သည့်အခါနောက်ပိုင်းတွင်လာလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးတစ်ခုကွိုတငျဖျောဖို့, တစ်ဦး _mixed အတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများ၏တိုးတက်လာသောတိများနှင့်အကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများ (ပုံ 4.5) ၏သဖွငျ့ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး design_combines ။
ပုံ 4.5: သုံးခုစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများ။ စံထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်ချက်များအကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများကိုအသုံးပြုဖို့ randomized ။ တစ်ဦးအကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းတခုရဲ့ဥပမာ Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ရဲ့ဖြစ်ပါသည် (2012) ဝီကီပီးဒီးယားမှ barnstars နှင့်ပံ့ပိုးမှုများကိုအပေါ်စမ်းသပ်မှု: ကုသမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများသို့သုတေသီများကျပန်းခှဲဝေသင်တန်းသားများ, ကုသမှုအုပ်စုတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦး barnstar, နှင့်အဘို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရလဒ်များပေးခဲ့တယ် အုပ်စုနှစ်စု။ ဒီဇိုင်း၏ဒုတိယအမျိုးအစားတစ်ခုအတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်နှစ်ခုစမ်းသပ်ချက် '' (2007) လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းနှင့်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုအတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းကိုသရုပျဖျော: သုတေသီမီနှင့်ကုသမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်သင်တန်းသားများ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများတိုးတက်လာသောစာရင်းအင်းတိပူဇော်, ဒါပေမဲ့သူတို့တတ်နိုင်သမျှရှက်ကြောက် (ဥပမာ pre-ကုသမှုနှင့်ကုသမှုကာလအကြားရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများ) ကိုဖွင့်ထားကြသည် (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) ။ အတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများကိုလည်းတခါတရံထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံဒီဇိုင်းများဟုခေါ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရောထွေးဒီဇိုင်းများအတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများ၏တိုးတက်လာသောတိများနှင့်အကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများသဖွငျ့ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပေါင်းစပ်။ တစ်ဦးရောနှောဒီဇိုင်းအတွက်, တစ်သုတေသီကုသမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများရှိလူများအဘို့အရလဒ်များအတွက်အပြောင်းအလဲနှိုင်းယှဉ်။ အမှုအများအပြားဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်၌တည်ရှိ၏အဖြစ်သုတေသီများပြီးသား, Pre-ကုသမှုသတင်းအချက်အလက်ရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ကခန့်မှန်း၏တိုးတက်လာသောတိကျမှုကွောငျ့, ရောထွေးဒီဇိုင်းများယေဘုယျအားဖြင့်အကြား-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းများဖို့ဦးစားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယေဘုယျအား Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကဒီဇိုင်းနှင့်လေ့လာမှုရလဒ်တွေကို (2007) ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ချက်ကျော်လွန်ရွေ့လျား၏တန်ဖိုးကိုပြသပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သင်သည်ဤတူသောစမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖန်တီးမှုပါရမီဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ (1) တရားဝင်မှုကုသမှုသက်ရောက်မှုများ, (2) သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခြင်း, (3) ယန္တရားများ: လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်များချမ်းသာစမ်းသပ်ချက်ဆီသို့သင်ပဲ့ပြင်လိမ့်မည်ဟုသုံးသဘောတရားများကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ သင်သည်သင်၏စမ်းသပ်မှုဒီဇိုင်းနေစဉ်သငျသညျစိတျထဲတှငျဤသုံးပါးအတွေးအခေါ်များကိုစောင့်ရှောက်လျှင်, သင်တို့ကိုသဘာဝကျကျတစ်ဦးထက်ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အသုံးဝင်သောစမ်းသပ်မှုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွင်ဤသုံးသဘောတရားများကိုသရုပျဖျောနိုင်ရန်အတွက်ငါကြော့ဒီဇိုင်းနှင့် Schultz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရလာဒ်များပေါ်တွင်တည်ဆောက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုအရေအတွက်ကိုဖော်ပြရန်လိမ့်မယ် (2007) ။ သင်ပိုမိုသတိထားဒီဇိုင်း, အကောင်အထည်ဖော်မှု, analysis နှင့်အနက်ကိုတဆင့်မြင်ရပါလိမ့်မည်အဖြစ်ကိုသင်အရမ်းရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ချက်ကျော်လွန်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။